အင်တာနက်ပေါ်က အိမ်တွေအကြောင်း -
Arthur Chan May 19, 2019 September 24, 2019
Website တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် သိသလောက်လေးရေးချင်ပါသေးတယ်။ကွန်ပျူတာပညာရှင် အမြင်နဲ့မဟုတ်ပဲ လေ့လာသူတစ်ဦးအမြင်နဲ့ပဲရေးပါ့မယ်။
ကျွန်တော်အရင်က website တွေနဲ့blog နဲ့ကို ကွဲကွဲပြားပြားမသိခဲ့ဘူး။Website မှာဆိုရင် ကိုယ်ပိုင် domain အမည်တစ်ခုရှိမယ်။ blog တွေမှာဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ blog platform တွေရဲ့ နာမည်တွေပါတတ်မယ် လို့ပဲခွဲထားခဲ့တယ်။ ဥပမာ WordPress တို့ blogger တို့ပေါ့။ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ တော့လေ့လာရင်းနဲ့ blogနဲ့ website မှာမတူတာတွေအများကြီးရှိတာကို တွေ့လာခဲ့တယ်။
Blog. ဆိုတာ များသော အားဖြင့် အလကားရတယ်။ ရိုးရှင်းတယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်က သတင်းတွေ၊ မျှဝေပေးဖို့ပဲ။အလကားရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဂျီးများလို့မရဘူးပေါ့ ။ ကိုယ်လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့မရဘူး ။ သူတို့ ပေးထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲ လုပ်လို့ရတယ်။ကိုယ်က လန်ပြန်နေတဲ့ design ကြီးနဲ့လုပ်ချင်တယ်။ ကာလာတွေစိတ်ကြိုက်ပြင်ချင်တယ်။ လုံးဝ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အရမ်းမိုက်နေမယ့် website လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Blogging platform တွေက မစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါဘူး။အဲဒီလို လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ မိမိစိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းလုပ်လို့ရတဲ့ .website ဖန်တီးဖို့လိုပါတယ်။
Website ဖန်တီးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ software တွေရှိပါတယ်။သူတို့ကိုတော့ CMS (Content Management System) လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာ နာမည်ကြီးတာတွေကတော့ WordPress,Joomla ,Drupal စတာမျိုးတွေပေါ့။ဒီနေရာမှာ တစ်ခု ရောထွေးတတ်တာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။
Blog မှာသုံးတဲ့ WordPress နဲ့ CMS WordPress နဲ့ကမတူပါဘူး။ရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့ WordPress ကကုမ္ပဏီကြီးနာမည်ပေါ့။သူတို့က နှစ်မျိုးလုပ်ပေးတယ်။တစ်ခုကတော့ အခမဲ့ Blog service တွေ ။ အသုံးပြုသူတွေက သူတို့ဘာသာ blog တွေ ကြိုက်သလောက် ဖန်တီးလို့ရတယ်။ ဖန်တီးသမျှ blog တွေမှာတော့ .wordrpess.com ဆိုပြီးနောက်မှာပါတယ်။ဒါကတော့ တော့ အခမဲ့ပေးတဲ့အပိုင်းပါ။
ဒီနေရာမှာတော့ Blog ဆောက်ရင် အသုံးပြုတဲ့ နောက်ကွယ်မှာ စာတင်တဲ့ ၊စာမျက်နှာတွေဖွဲ့တဲ့ ၊ setting တွေရှိတဲ့ Dashboard ကိုတော့ WordPress CMS လို့ခေါ်ပါတယ်။WordPress က သူ့ရဲ့ blog. အသုံးပြုသူတွေကို သူတို့ရဲ့ Wordrpress CMS ခလုတ်ခုံကြီးနဲ့ရင်းနှီးအောင် အခမဲ့ပေးသုံးထားပါတယ်။တစ်ခုပဲရှိတာက တကယ့် ပြုပြင်ချင်တဲ့အပိုင်းတွေ၊ ဥပမာ Theme အသစ်တွေထပ်ထည့်ချင်တယ်။ Plugin အလန်းတွေသုံးချင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်တိုင် Coding တွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Blog မှာအဲဒီ Function တွေသုံးမရအောင်တားမြစ်ထားပါတယ်။WordPress CMS ကိုအပြည့်အဝသုံးချင်တယ်ဆိုရင် နည်းလမ်း နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
တစ်ခုကတော့ Free user ကနေ လစဥ်ကြေးပေးပြီးသုံးရတဲ့ user အဖြစ်အဆင့်မြှင့်လိုက်တာပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ WordPress CMS Software ကြီးကို ကွန်ပျူတာထဲ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ စက်ထဲမှာ Install ပြုလုပ်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ website ကိုအစကနေစတည်ဆောက်။ ကိုယ့်ဘာသာ hosting ထားစရာနေရာရှာ ။ ကိုယ့်ဘာသာ maintain လုပ် ။ဒီလိုပါ။
တစ်ခုသိရမှာက အဲဒီလို စက်ထဲ ထည့်သုံးလိုက်ဖို့ အခြားလိုအပ်တဲ့ Software တွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ Wamp server. တို့။ Xampp တို့ ။WordPress CMS. ကိုစက်ထဲသွင်းပြီး လည်ပတ်တာနဲ့ ..မိမိ စိတ်ကြိုက် website ကို မိမိကြိုက်သလို ဒီဇိုင်းလုပ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးလို့ရပါပြီ။အဲဒီလို CMSကိုသုံးတဲ့အတွက် အဖိုးအခ တစ်ပြားမှမပေးရပါဘူး။
ဒါပေမယ့် Website တစ်ခု လုပ်ဖို့ အလကားမရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့က CMS ကြီးနဲ့တော့ WEbsite ကိုရေးပြိးပြီ။ဒီ Website ကြီးကို အင်တာနက်ပေါ်ဘယ်လိုတင်မှာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကရှိလာပြီ။ဒီ Website ကြီးကို ထားစရာနေရာကို Hosting လို့ခေါ်ပါတယ်။
Hosting ငှားစားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအများကြီးရှိပါတယ်.Hosting ဘာကြောင့်လိုတာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ကျွန်တော်တို့ Website တွေကို ၂၄ နာရီ ၇ရက် တစ်ချိန်လုံးအင်တာနက်မှာရှိစေချင်တယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက် အချိန်ပြည့်ရနေတဲ့ လျှပ်စစ်မီး၊ အင်တာနက်၊ နဲ့ အချိန်ပြည့်ဖွင့်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်း အဲဒီလို အချိန်ပြည့်အင်တာနက်၊ မီးနဲ့ ကွန်ပျူတာလည်းအချိန်ပြည့်ဖွင့်မထားနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့် အဲဒီလို အချိန်ပြည့် Facitlity ဖွင့်ပေးထားပြီး ဝန်ဆော်ငမှုပေးတဲ့ သူတွေဆီက နေ ကိုယ့် WEbsite လေးအတွက် တစ်နေရာစာငှားဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ်မကြည့်နိုင်တာတွေကို သူတို့က ကြည့်ပေးတယ် ၊ ဂရုစို်က်ပေးတဲ့အတွက်ဝန်ဆော်ငခတော့ပေးရတာပေါ့ ။မဟုတ်ရင် ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးယူရမှာလေ။အဲဒီမှာလည်း နေရာမျိုးစုံရှိတယ်ဗျာ။ကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့တူတဲ့ Hostingကွန်ဒိုနဲ့တူတဲ့ Hostingတိုက်ခန်းငှားနေရသလိုဖြစ်တဲ့ Hosting တွေသိတဲ့အတိုင်း ပိုပြီးသီးသီးသန့်သန့် ဖြစ်ချင်ရင် ပိုစျေးကြီးတဲ့ hosting ယူရမှာပေါ့။ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လိုဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ပြဿနာကိုယ်ရှင်း ဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်မယ်။ငှားနေရတဲ့အခါမှာတော့ အခြားကိုယ့်လို ဘတ်ဂျတ်ချွေတာသူတွေနဲ့ အတူ မျှသုံးရတာရှိမယ်။ ကုမ္ပဏီကလည်း ဒီလိုမျှသုံးသူတွေအားလုံးအတွက် လိုအပ်တာတွေလုပ်ပေးမယ်။ အဲဒီလိုပုံစံနဲ့ Hosting လည်းရှိတယ်။သူ့ကိုတော့ Shared Hosting လို့လူသိကြတယ်။ သူကတော့ တစ်လကို 8 USD လောက် အနည်းဆုံးကုန်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် မျှသုံးရတဲ့အတွက် မိမိ Website က လူအရမ်းဝင်တယ်။ အရမ်းအလုပ်များလာတယ်ဆိုရင်တော့ ငှားနေလို့မရတော့ပါဘူး။ သီးသန့်အိမ်ဖြစ်တဲ့Dedicated Server တွေငှားပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ထိန်းသိမ်းရမှာပါပဲ။ ဒီမှာပြောဖို့ကျန်တာက
WEbsite တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆောက်ထားပုံချင်းမတူပါဘူး။WordPress ကတော့ သာမန်လူတွေသုံးလို့အလွယ်ဆုံးပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Blog မှာသုံးတဲ့ ပုံစံအတိုင်းသုံးလို့ရတာရယ် ကုတ်တွေရေးသားရတာတွေရယ် မလိုအပ်သလောက်မိုလို့ပါပဲ။Plugin တွေလည်းအများကြီ:ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် သာမာန် သတင်းအချက်အလက်ပဲ ပေးတဲ့ Website မျိုးတွေမှာ WordPress ကိုသုံးတာအဆင်ပြေပေမယ့်။ကြီးမားတဲ့ Database တွေ ရှာဖွေရေးWebsite တွေ ၊ ပိုမိုရှုပ်ထွေးတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အခြား Joolma CMS တို့ Drupal CMS တို့သုံးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ဒါပေမယ့်လည်း အဲဒီ CMS တွေကတော့ သာမန်လူလွယ်လွယ်နဲ့ အသုံးပြုတတ်ဖို့ ခက်ခဲလေ့ရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ဒီထက်ပိုအဆင့်မြင့်တဲ့ website တွေ..ဆိုရင်တော့ CMS မသုံးပဲ သီးသန့် ကိုယ်ပိုင် Programm ရေးပြီး တည်ဆောက်ကြပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်မှု နဲ့ပညာရှင်လိုပေမယ့် ပိုပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖန်တီးနိုင်တာပေါ့။
Website လည်းဆောက်ပြီးပြီ။ Hosting လို့ခေါ်တဲ့ သိမ်းဆည်းတဲ့နေရာလည်းရပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်Website ကိုလိပ်စာပေးရပါသေးတယ် ။ လိပ်စာမရှိရင် ကျန်တဲ့သူတွေက ကိုယ့်ဆီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိမှာလဲနော်။ဒါကြောင့် လိပ်စာ လို့ ခေါ်တဲ့ Domain address တွေကို ငှားရပါတယ်။ဒီမှာဘာလို့ ဝယ်တယ်လို့ မပြောတာလဲဆိုတော့ ဘယ် ဒိုမိန်းကိုမှ အပိုင်ဝယ်ထားလို့မရပါဘူး။နှစ်ပေါင်းများစွာ ငှားထားလို့ပဲရှိပါတယ်။www.google.com တို့ www.facebook.com တို့ဆိုတာတွေက ဒိုမိန်းလိပ်စာတွေပါ။ကိုယ်လိုချင်တဲ့ လိပ်စာ ကသုံးနေတဲ့သူရှိမရှိ လိုက်ရှာ ၊ မရှိရင် ငှားသုံးလို့ရပါတယ်။ဒိုမိန်းအသစ်တွေဆိုရင်တော့ စျေးပေါလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်လမှ တစ်ဒေါ်လာကျော်ကျော်ပဲကျလေ့ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် နာမည်ကြီးပြီ:သား ဒိုမိန်းတွေ ။ လူတိုင်းသိနေတဲ့လိပ်စာတွေ။ သိသာထင်ရှားတဲ့နာမည်တွေ ၊ အမည်လှလှတွေဆိုရင်တော့ ဒိုမိန်း ပွဲစားတွေလက်ထဲရောက်နေလေ့ရှိပါတယ်။ဒိုမိန်းပွဲစားတွေက လူကြိုက်များ စိတ်ဝင်စားနိုင်မယ့် ဒိုမိန်းတွေကို ကြိုတင်ဝယ်ထားပြီးတကယ်အသုံးပြုချင်တဲ့သူရှိမှ ဈေးကြီးကြီးနဲ့ပြန်ရောင်းတာပါ။တကယ်အောင်မြင်လာတဲ့ website တွေမှာဆိုရင် နာမည်တစ်ခုကလည်းတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်။Facebook ဆိုရင် သူ့ရဲ့ မူရင်းနာမည်က thefacebook.com ပါ။The မပါတဲ့နာမည်လိုချင်ပေမယ့် သုံးနေတဲ့သူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် facebook.com ကို အသုံးပြုနေတဲ့သူဆီကနေ ဈေးကြီးကြီးပေးပြီး ပြန်ဝယ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ ဒိုမိန်းအကြောင်းပေါ့။
ဒါဆိုရင် website တွေမှာဘာတွေပါလည်းမြင်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။Domain အိမ်လိပ်စာရယ်Hosting ဆိုတဲ့ နေရာတိုက်ခန်းတွေရယ်CMS လို့ခေါ်တဲ့ website ဆောက်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေရယ်ပေါ့။Website ရဲ့ရှုပ်ထွေးပုံ ၊ နဲ့ အသုံးပြုမယ့် Function တွေပေါ်မူတည်ပြီး တည်ဆောက်ရတာလည်းလက်ဝင် အလုပ်ရှုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ တကယ် လို့ဆောက်ပြီးသွားရင်တောင် ဒီတိုင်းပြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။လက်တည့်စမ်းချင်တဲ့ ဟက်ကာတွေရန်ကို တတ်နိုင်သလောက်ကြိုတင်ကာကွယ်တာမျိုး။အမြဲတင်ထားတဲ့ အချက်အလက်ဒေတာတွေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျောက်မသွားအောင်Backup ပုံမှန်လုပ်တာမျိုး။ website ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေလားမလုပ်နေလား စစ်တာမျိုးတွေကပါပါသေးတယ်။ဒါတွေအားလုံးကသာမာန် လူအကြမ်းဖျဉ်းနားလည်ဖို့ပါ။ကျွန်တော်လည်းသာမာန်လူပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းရိုးရိုးစင်းစင်း ပြန်လည် ရေးပြတာဖြစ်ပါတယ်။
This article was first appeared in chanlaymm.wordpress.com